LIID: CRM nwere ọgụgụ isi site na SmartPhone gị | Martech Zone
LIID: CRM nwere ọgụgụ isi site na SmartPhone gị
Ndị na-ere ahịa ahịa ama ama maka ịgbakwunye ọrụ n'ime ụlọ ọrụ CRM. Ọnọdụ ndekọ ọrụ nwere ike ịdị obere dị ka 20%, na-eduga amụma amụma e mere dabere na data ahụ ga-apụ na 80%. AKWỤKWỌ mee nsogbu a site na ngwa smartphone nke na-enye ntinye ntinye data akpaka na ngwaọrụ iji mee ka ndụ dị mfe dị ka nyocha kaadị azụmahịa na ederede ederede na ederede
The AKWỤKWỌ mobile ngwa na-arụ ọrụ dị ka a mebere ahịa nnyemaaka, na-echetara reps na-esochi mgbe a nzukọ na na-akpọtụrụ niile na-aga n'ihu ikpe.
Ngwa a bụ CRM-agnostic, na-akwado ugbu a Salesforce na Ihe omimi Microsoft na ndị ọzọ iji soro. Nke kachasị mma, ọ bụ n'efu iji ndị ahịa abụọ mbụ n'ime nzukọ gị! Ndị ọrịre nwere ike ibudata iOS ma ọ bụ ngwa gam akporo ma melite njikọ na CRM ha.
Budata LIID maka iPhone Budata LIID maka gam akporo
Tags: ọrụ osisingwa igweCRMngwa iphoneAKWỤKWỌnbanyeIhe omimi Microsoftmobile ngwamobile ngwandị ahịa
Etu esi eji LinkedIn maka ahia